mogozay.com တွင် ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ?
0 ပစ္စည်းများ - Ks 0
ဖိနပ် / အိတ်
အားကစားပစ္စည်း / ပွဲတော်
ပရိဘောဂ / ပစ္စည်းများ
နေအိမ် / အိပ်ရာခင်း
လူနေအိမ် / မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ
ကား / မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
လေ့လာရေး / စာအုပ်များ
အလှအပ / ထိန်းသိမ်းမှု
မိတ်ကပ် / ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ / အကူအညီ Center
Q: mogozay.com တွင်ဈေးဝယ်သူအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်း (အကောင့်)တစ်ခု ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ?
ပထမဦးဆုံး “My Account” သို့သွားပါ။
ညာဖက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးတွင်ရှိသော "Sign up" ကိုနှိပ်ပြီး မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းဖြည့်စွက်ပါ။
လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းပြီးနောက် "Submit" ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုအကောင့်အသစ်တခု ရရှိသွားပါပြီ။
ထို့နောက် Mogozay မှကြိုဆိုသော အီးမေးလ်စာတစ်စောင်ကို သင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q: မိမိအကောင့်ရဲ့(ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်) "Password" မေ့သွားရင် ဘယ်လိုပြန်ရယူရမလဲ?
ပထမဦးစွာ"Your Account" သို့သွားပါ။
ညာဖက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးတွင်ရှိသော "Login" ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် "Proceed" ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Password အသစ်(ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်) ပြန်လည်ရယူရန် လိုအပ်သည့်အဆင့်များကို လမ်းညွှန်ပေးမည့် အီးမေးလ်စာတစ်စောင်ရရှိနိုင်ရန် "Forgot your Password" ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါ။
Q: မိမိအကောင့်ရဲ့(ကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်) "Password" ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ?
ပထမဦးစွာ ညာဖက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးတွင်ရှိသော "Your Account" ကိုနှိပ်ပါ။ (အကယ်၍ မိမိအကောင့်ထဲရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါက သင့်နာမည်ကိုမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
"Contact Details box" ထဲက "Change Password" ရွေးပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Q: mogozay.com တွင် ရောင်းချသောပစ္စည်းများအားလုံးသည် သုံးပြီးသားမဟုတ်သော အသစ်များဖြစ်ပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ လုံးဝမသုံးရသေးသော ပစ္စည်းအသစ်များကိုသာ ရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက်ခန့်ကြာပါတယ်။
ပစ္စည်းမှာယူလိုပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆင့်များအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါသည်၊
မိမိဝယ်ယူလိုသောပစ္စည်းကို ဈေးဝယ်လှည်းထဲသို့ထည့်ရန် “buy now” ကို နှိပ်ပါ။
တဖန် ညာဖက်အပေါ်ထောင့်တွင်ရှိသော "Cart" ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
ငွေပေးချေရန်အတွက် "Proceed to Checkout" ကိုထပ်နှိပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိမှာယူထားသောပစ္စည်းကို ပို့ဆောင်ပေးစေလိုသည့် လိပ်စာ၊ အမည် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် တို့အား ဖြည့်သွင်းပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ငွေပေးချေနည်းတစ်ခုခုအား ရွေးချယ်၍ မှာယူနိုင်ပါသည်။
mogozay မှာ ငွေပေးချေနိုင်သော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
အိမ်အရောက်ငွေပေးချေစနစ် (သင့်ထံပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးမှ ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်း)
Credit/MPU Card မှပေးချေခြင်း
Q: အမှာပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းရောက်ရှိမလာပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
မိမိ၏အမှာပစ္စည်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ရောက်ရှိမလာခြင်းများကြုံတွေ့ရပါက ပထမဦးစွာ mogozay မှ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါသည်။ မိမိ၏အမှာပစ္စည်းများ၏ လက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဌာန၏ ဖုန်း ၀၉ ၇၈၈ ၉၇၇ ၈၈၈ သို့ ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း၊ hello@mogozay.com သို့အီးမေးလ်ပို့၍သော်လည်းကောင်း အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Q: မိမိမှာယူလိုသောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုသိရှိနိုင်ပါသလဲ?
မိမိမှာယူလိုသောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူပြီးကြောင်းအတည်ပြုပြီးပါက သင့်ဆီသို့အီးမေးလ် နှင့် သင့်ဖုန်းသို့ SMS တစ်စောင် ပေးပို့ဆက်သွယ်ပါမည်။ သင်မှာယူထားသောပစ္စည်း(များ) သိုလှောင်ရုံမှထွက်ခွာသည်နှင့်တပြိုင်နက် သင့်ဆီကို အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mogozay နှင့်ပတ်သတ်၍ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များရှိပါက ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ စကားစမြည်ပြောရာနေရာ (Chat) မှတဆင့်လည်းကောင်း၊ hello@mogozay.com သို့အီးမေးလ်ပို့၍သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါက လိုအပ်သောအကူအညီကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
၁၁ သုမင်္ဂလာ အိမ်ရာအပိုင်း 3
Tosta ရိပ်သာလမ်း။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်
ဖုန်း: 09 7889 77888
mogozay.com တွင် ရောင်းချရန်
စာရင်းသွင်းမည် ကျွန်ုပ်တို့အရေးကြီးသတင်းနှင့် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုများကိုရယူရန် & အတွင်းသတင်းများ:
: * စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ သဘောတူလက်ခံပါသည်